Ụdị Roses "Niccolò Paganini": nkọwa nke umu osisi, foto, ịkọ na nlekọta - Mkpụrụ ubi - 2020
Roses "Niccolo Paganini": ọdịda na nlekọta
Roses, nke a na-akpọ mgbe nnukwu onye egwú Italian bụ Niccolò Paganini, ga-eji ogige ọ bụla chọọ mma. Otu esi akụ ha, lekọta ha, n'ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi gbasaa okooko osisi, ma ọ bụrụ na ha nwere ọrịa - gụọ ihe a niile n'isiokwu anyị. Anyị ga-agwakwa akụkọ banyere okike nke Roses ndị a ma kọwaa gị àgwà ha kachasị mma.
Ịgbachi na mulching
Na-akwadebe maka oyi, ndo
Jiri nhazi ihe odide
Nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ na iji ọgwụ ọjọọ eme ihe
Video: Niccolo Paganini Roses
N'afọ 1952, a na-edebanye aha Floribunda nke Roses, nke pụtara "ịba ụba". Ndi otu a sitere na ogologo oge na uzo ndi Daneder bu Svend Poulsen. Taa, Floribunda agbasawo ezinụlọ ya dịgasị iche iche iche, otu n'ime ha bụ Niccolo Paganini dị iche iche.
Nke a dịgasị iche iche bụ kọmpị kọmpat nke nwere nnukwu akwụkwọ gbara ọchịchịrị, na-eru elu nke dị ka 0.8 m. Mkpịsị uhie uhie ya adịghị agbanwe agba n'oge oge okooko. Na brush na-esi na 5 ruo 12 buds, nke na-emeghe ngwa ngwa ma oge ntoju ruo ogologo oge.
Lelee ụdị Roses kachasị ewu ewu: "Westerland", "Leonardo da Vinci", "Benjamin Britten", "Chippendale", "Rosarium Utersen", "Aqua", "Black Magic", "Black Magic", "Black Baccara" "Patio" na "Lady Rose".
Ụdị dịgasị iche iche dị mma maka ma ọkụ na oke ọkụ n'ihi na ọ bụ ma na-eguzogide ọgwụ na ntu oyi na okpomọkụ.
Oge kachasị mma maka ịbanye bụ njedebe oge opupu ihe ubi.
Iji malite, họrọ ebe na saịtị ahụ. Gbalịa ka ị ghara inwe mmiri dị n'akụkụ okooko osisi, ma ọ bụ ka ha nọrọkwa ma ọ dịkarịa ala 60 cm. Ozugbo ewepụ akụkụ nke ubi ebe ọ na-ekpo ọkụ, ma buru n'uche na okooko osisi agaghị anabata ikuku. Achọla ebe dị nso na osisi nwere ike ichebe Roses ma were mmiri niile - okooko osisi hụrụ anyanwụ na okpomọkụ ọkụ. Ọzọkwa, adịghị akụ mkpụrụ osisi ndị a n'ebe ndị dị elu (ebe ha ga-anọ n'okpuru obvetrivaniyu siri ike) na ala dị larịị (n'ebe ndị a, enwere ọnọdụ dị elu nke mmiri). Ebe kachasị mma bụ ebe dị larịị ma ọ bụ dị elu.
Mụta otu esi akụ Roses n'ime igbe ahụ, na mmiri na ụbịa.
Cheta: Roses na-ahọrọ ọmarịcha ọkụ, ìhè, ala ala ndị dị ala na humus; ma ọ bụ ezigbo cheruzems ka a na-etolite. A gaghị atụ aro ájá ma ọ bụ ájá ákwá iji mee ihe, ọ ga-efunahụ osisi na oyi na overheat n'oge okpomọkụ.
Elegharala eziokwu ahụ anya na Roses chọrọ ala acidic pH 6.0-6.5. Ọ bụrụ na acidity dị ala, enwere ike idozi ya site na ịgbakwunye peat na nri n'ebe ahụ. Iji belata acidity nwere ike ịbụ wayo ma ọ bụ uyi.
Ọ dị mkpa! A na-atụ aro ka ị ghara iji nkume nkume, saline na ala mmiri. Adịla osisi Roses ebe ha toro ruo afọ 10.
Ugbu a, anyị ga-akụ mkpụrụ osisi site na nzọụkwụ:
hichaa ebe irighiri ihe na unyi, kpoo ya;
kwadebe olulu 0.6 m miri emi;
tinye pebbles ma ọ bụ nkume a gwepịara egwepịa na 10 cm na ala nke olulu ọ bụla;
mgbe nke ahụ gasị, gbakwunye akwa nke 10 cm nke fatịlaịza fatịlaịza - nri, compost;
kpuchie na ala ubi ubi;
tinye mgbọrọgwụ nke ifuru maka nkeji 7 na obere okwu okwu, dịka ọmụmaatụ, nke ụrọ na mmiri;
Roses na-abanye n'ime oghere n'ụzọ dị otú a iji mee ka olu gbanye mgbọrọgwụ 4 cm n'ime ala;
ọtụtụ mmiri na okooko osisi mulch na peat ma ọ bụ sawdust.
Otu esi echekwa Roses, anyi na akowa ya n'ihu.
Roses n'ime ụlọ chọrọ nlebara anya dị ukwuu, ya mere gụọ otú e si elekọta rose na ite.
A ghaghị ịme mmiri Roses n'ụba n'oge niile, karịsịa n'oge oge ọkụ. Maka 1 ohia ị chọrọ 1 ịwụ mmiri.
Ọ kachasị mma ime otu ugboro n'izu n'ihuru ka e wee ghara ịgba ọkụ na mmiri.
A na-eji mgbakwasa elu mee oge dum nke mmepụta osisi vegetative. Ma buru n'uche na a ghaghị ichikota nri ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe ndị dị ndụ na ihe ndị na-egwupụta ihe ndị dị na mmanụ. N'ihi nri nri na ịnweta nri, ihe oriri na-edozi ahụ, na ihe ndị metụtara organic, n'ihi eziokwu ahụ na ọ na-abawanye ogologo oge, na-eme ka ha nweta ngwa ngwa. Ya mere, mgbe fertilizing na ịnweta nri (saltpeter, potassium, urea) ọ na-atụ aro ka ị wụsa mmiri mmiri na - fermented mullein (oke 1:10), anụ ọkụkọ nke fermented (1:20), albumin (1:10), ihe nsị nke ahịhịa.
Lelee mgbe na otu esi esi mee ka mmiri fatịlaịza, ụdị nlekọta nke rose chọrọ na mmiri na mgbụsị akwụkwọ.
A ghaghi ime ihe dika nke a: jupụta mbadamba 3/4 na mbadamba 3/4 juputara na nettle net, dandelions, mowed grass; kpuchie mmiri ma tinye 2-3 tablespoons nke soda ash ma ọ bụ urea; kwe ka ọ na-agba izu otu izu. Wepu ahihia ahihia na compost ikpo, dozie mmiri ma tinye maka ogbugba mmiri n'ubi (1-1.5 l nke infusion kwa 10 l mmiri).
Tupu ọdịdị nke buds nke abụọ okooko, bushes ga-nri na nitrogen na phosphate nri (15-20 g nke ammonium nitrate na 30-40 g nke superphosphate kwa 10 lita mmiri). Mgbe Roses gbara oge nke ugboro abụọ, a na-enye ha nri na potassium.
A ghaghị ịtọhapụ ala mgbe nile ma gbanye ya. Nke a ga-eme ka mgbọrọgwụ osisi ahụ jupụta n'ikuku na mmiri.
N'okpuru osisi bushes, ala na-atọghe ruo omimi nke ihe karịrị 10 cm, ebe ọ bụ na e nwere ihe ize ndụ nke imebi mgbọrọgwụ nke rose ahụ.
Ọ dị mma ka ị na-eme ka ala dị na gburugburu 8 cm kwụnye ala. Nke a ga-azọpụta mmiri na igbochi ogwu.
Ị ma? Ndị mmadụ na-ekpo ọkụ mgbe nile na-esi ísì ụtọ nke Roses dịkwuo mma ma dị jụụ. Na ime ka ọnọdụ ahụ dịkwuo mma na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ na ifuru nke ifuru a, n'ihi na a na-ewere ya dịka otu n'ime ndị na-eme ihe ike nke kachasị ike.
Ihe ọzọ dị mkpa - ịkụcha osisi. Basic iwu maka kwachaa Roses:
Oge kachasị mma maka nke a bụ mmalite oge opupu ihe ubi, mgbe buds ga-azaba na bushes. Nke a bụ nke kachasị mkpa, n'ihi na ọ na-ekewa alaka ndị nwụrụ anwụ na ndị nwere ike inweta akụrụ.
Mgbe oge okpomọkụ ọ bụla mkpa iji wepụ naanị okooko osisi na-acha ọkụ, nke mere na ohia nwere ike ịmalite ọzọ.
N'oge mgbụsị akwụkwọ kwachaa, belata alaka ndị ahụ na-eri "ihe oriri" na ndị torola oke.
Ike - site na isi nke Ome na ọkwa nke 2-4. Ezi maka mmiri akuku nke seedlings na maka rejuvenation ochie bushes.
Ọkara ma ọ bụ dị ala - n'ogo nke 5-7 buds. Na-eme ka rose dị ka ọ dị mma ka o kwere mee, na-eme ka ị ghọọ okooko.
Mbibi - mbibi nke okooko osisi na-adaghị adaba, nta mkpụmkpụ nke Ome.
Ejikọtara - jikọta ụzọ atọ gara aga, ekele ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu. A na-ewere ụdị nke a dịka ezigbo nhọrọ maka Niccolo Paganini.
Roses na-anabata okpomọkụ dị elu ruo -7 Celsius C. Ụdị ntu oyi dị otú a na-enyere ha aka ime ka ha sie ike. Kpuchie ha ka ha dọọ ọdụ mgbe temometa tụfuru -10 Celsius.
Tupu ikpuchi okooko osisi, i kwesiri ikpochapu ala, wee wepu akwukwo na ihe ndi ozo site n'osisi, gbutu osisi a ruo iri abuo 40. Mgbe nke ahu gasiri i nwere ike ikpuchi osisi ahu na osisi oak, osisi paa osisi, na adianye, a na akwado ya ka o kpuchie ya na ihe ndi a kpochapughi.
Ọ bụrụ na oyi na-acha, obere snow kpuchiri ya na rose. Ke ini etuep, ọ ga-abụ ndị ọzọ ndo, na na mmiri - na mmiri dị mkpa.
Ụdị dịgasị iche iche mara mma nke ukwuu, a pụkwara ịkụ ya n'ebe ọ bụla: mepụta otu ogige rose ma ọ bụ flowerbeds adighi, ala, alpine slides na ya. Ọ ga-abụ ihe mma maka ubi nke aka gị na ogige ntụrụndụ.
Ndị Roses a jikọtara ya na agba dị iche iche, ma ihe kacha mma maka ha bụ mgbịrịgba, petunias, Veronica.
Ị ma? Mmiri mmanụ aṅụ bụ akụkụ nke ọtụtụ mmanụ na-esi ísì ụtọ. N'eziokwu, ọtụtụ mgbe ọ bụ ihe sịntetik, n'ihi na mmanụ nkịtị dị n'elu bụ ihe dị oké ọnụ ahịa nke dị oké ọnụ ahịa karịa gold na platinum. Maka 1 n'arọ mmanụ a, ọ dị mkpa iji hazie atọ tọn petals.
E nwere usoro ụzọ ozuzu anọ. Ihe kachasị mfe a na-akpọ grafting, ihe kachasị ike bụ budding (ọ bụ naanị na ọ bụ ezigbo ọkachamara).
Cuttings na-akwado site na kpụrụ na lignified Ome. Bee ha banyere 8-10 cm ogologo ma 0.5-0.7 cm oké.
Mee ka mkpịsị aka elu gbasaa n'akụkụ aka (ọ ga - adị 5 mm elu karịa akụrụ), obere - angular (dịka 45 Celsius).
Wepu ogwu, akwukwo.
N'ihi na mma mma nke cuttings tupu kere itinye ke phytohormonal ọgwụ.
Mee obere oghere dị omimi karịa 10 cm miri, otu akụkụ nke ya kwesiri ịdị na-adịgide adịgide (ọnyá ga-adabere na ya).
N'etiti olulu, jide n'aka na ị ga-esi n'ebe dị anya 15-20 cm.
Na-ekpuchi osisi na ihe nkiri, ma na-akwado ya, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume na fim ahụ dina n'elu okooko osisi.
Na-ebuli ihe nkiri ahụ, na-ekuku osisi ahụ, na-enye ha mmiri, na-azụ ha, na-atọghe ala, wepụ ata.
Tupu oge oyi, a na-ekpuchi ahihia n'ọtụtụ ebe nke mkpuchi mkpuchi, mkpuchi elu na ihe nkiri site n'inwe mmiri. Ya mere ị ga-echere oge 2 wee gụchaa okooko ahụ na ebe ha na-adịgide adịgide.
Tupu akuku, gbanye osisi ahụ maka minit 20 na ngwọta nke hydrogen peroxide, wee debe ha n'ime friji. Site n'oge ruo n'oge, ṅaa ntị na ha: ọ bụrụ na ebu ahụ ebido, chekwaa peroxide ọzọ.
Mgbe ihe dị ka ọnwa 2, mkpụrụ osisi ahụ na-eto. Wepụ ha ma zipụ ha na mbadamba peat ma ọ bụ iko nke ọ bụla nke ụwa.
A gwara ala elu ala ka mulch perlite chebe okooko osisi site na "nwa ụkwụ".
Mmiri na-eji nwayọọ nwayọọ edozi.
Ụbọchị ìhè maka ha - 10 awa, ya mere jiri ọkụ ọzọ.
Mgbe ọnwa 2 gachara, buds ga-apụta, ha ga-emeghe izu ise ka nke ahụ gasịrị.
N'oge opupu ihe ubi, transplant seedlings n'ime oghe ala.
Na mmalite oge opupu ihe ubi, gbapụ ebe ahụ site na ahịhịa na-esote ohia, gbakwunye peat.
Mee ka mpekere 10 cm na-esote ụzụ ahụ ka eweghachite. Ma tụlee: site na ohia ọ ka mma iji naanị 1 nhazi.
Na oge ịse, wepụ ogbugbo na obere ebe na nko n'ala.
Kwadebe mkpọchi nke ị na-ekechi njedebe nke oge ịse (ị ga-ahụ).
Na-ekpuchi na ala nke ụwa na mgbakwunye nke compost.
Na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ - igwu, jiri nlezianya kụrụ site na ohia na otsadite.
Ọ bụrụ na seedling ga oyi na-emeghe ala, jide n'aka na-ekpuchi ya na peat ma ọ bụ compost. Ma a ga-akụ mkpụrụ ahụ n'ime ite, echekwara na okpuru ulo, ma weghachite ya na mmiri ka ọ bụrụ ebe ebighi ebi.
Ọ dị mkpa! Echefukwala iwepụ buds, n'ihi na mkpụrụ osisi ahụ kwesịrị iwusi mgbọrọgwụ ya ike.
Kpoo mmanu aka nye onye nyere gi aka (nke mgbe ka o jiri ohia mee ihe). Ị nwere ike ime nke a na teepu nkịtị. Ma naanị otu ọnwa, ọ bụghị ogologo oge.
Mpempe akwụkwọ ndị a na-ekpuchi ya na ogige pitch pụrụ iche.
Mgbe 10-15 ụbọchị ị ga-ahụ nsonaazụ. Ọ bụrụ na ịgba ọgwụ mgbochi ahụ na-aga nke ọma, akụrụ ga-acha akwụkwọ ndụ ma gbaa aza, dị njikere maka germination, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, akụrụ ga-agbanye oji ma mesịa kwụsị.
Ihe ngbacha kachasị mma nke na-awakpo ifuru a bụ Rosy aphid, ududo ududo, Rosy sawfly. Enwere ike iji aka na-achịkọta aphids, ma ọ bụ ọrụ Actellic na Rogor nwere ike iji. Megide akọrọ na sawfly ịzụta Acrex, DDT ma ọ bụ Isofen.
Lelee ihe nwere ike na-egbu Roses na otú e si edozi pests nke Roses.
Na mgbakwunye na pests, rose nwere ike ibuso ọrịa ndị na-esonụ:
Rust - uhie-acha ọbara ọbara tụrụ na epupụta, megide nke kwesịrị ekwesị preparations na ọdịnaya zinc.
Ebe nhie - ncha oji na epupụta ndị na-abawanye na njikota. Ọ dị mkpa iji wepụ akụkụ niile metụtara ya na ohia na n'ala dị n'okpuru ya. Mgbe nke a gasịrị, na-emeso otu mullein wepụ (were akụkụ 1 nke mullein n'ime akụkụ 3 nke mmiri, mee ya ka ọ nọrọ na ebe gbara ọchịchịrị ruo ụbọchị 10). Usoro kachasị oke bụ iji Fundsol ma ọ bụ Captan.
Mealy igirigi - acha ọbara ọbara-aja aja, kpuchie na ọcha ntụ ntụ mkpuchi. N'okwu a, jiri infusion mullein. Ị nwekwara ike iji ụmụ ahụhụ "Benlat", "Karatan".
Kemgbe ọtụtụ afọ, etinyewo m akwụkwọ nri na griin ha, n'ihi ya, m na-echekarị banyere ịzụta ụzọ iji lụsoo aphids na udide ududo. N'ụlọ ahịa ahụ, a gwara m ka m gbalịsie ike na-emepụta mkpụrụ osisi ahụ na Actellic. M zụtara ya, bịa n'ụlọ, gbasaa ọgwụ ahụ dịka e dere na ntuziaka (m weere 2 ml nke ọgwụ maka lita 0.7) ma n'anyasị, egosipụtara m cucumbers, akwụkwọ na eggplants na griin haus. N'ụbọchị nke abụọ, ahụrụ m ihe ga-eme karịa ihe niile m tụrụ anya ya. Ndị ahụ malitere ịmaliteghachi, ndị ọhụrụ ovaries malitere ịpụta. Ma ugbua kwa afọ, mgbe m kụrụ mkpuru osisi n'ala, ana m agbanye maka mgbochi ọgwụ "Actellic" nke akwukwo nri na akwukwo nri. Ebe ọ bụ na nkwadebe a bụ nsí, ọ dị mkpa itinye uwe na-arụ ọrụ na uwe globa mgbe ị na-emeso osisi. Chọta ọgwụ a abụghị ihe siri ike, ebe a na-ere ya na ụlọ ahịa niile, "Ihe niile maka ubi".
Site na ọgwụ a, ezutere m ogologo oge gara aga, oge mbụ mgbe lilies na-arịa ọrịa, ero ahụ na-ada na njakpọ, mmiri mmiri, na ihu igwe dị jụụ. Ọrịa a adịghị emetụta bulbs, ma ọdịdị nke ihe ọkụkụ osisi ahụ, osisi ahụ nwere ike ịnwụ, ọ bụ ihe okike ka ị ghara ịhụ okooko, mgbe ahụ, m, na-asọgharị n'ebe ọ bụla o kwere omume ịchọ ihe ọmụma, kwadoro nkwadebe a, emeghị ka ọ ghara ịmalite, ọzọ ọrịa ahụ agbasaghị. Mgbe ahụ achọrọ m ịzụta ihe ọzọ, mana enweghi ike ịchọta ebe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụghị na obodo agbata obi - Belarus, ọ bịara bụrụ na amachibidoro ebe a n'ihi na ọ bụ nsi. Mgbe ahụ, m na-eji ya otu ugboro maka ịgwọ ma chebe okooko osisi ụlọ, ihe gbagotere na ala zụrụ, amaghị m na seedlings nke okooko osisi na-anwụ na ngwugwu, enyeghị aka - ọ dịghị ihe ọ bụla dị nro, ma kpebie - ntọala a zọpụtara, nke a na-efesa ya, na-atụgharị, na-ekiri Nlekọta niile, anu ulo anaghị enweta ụlọ ahụ, osisi ahụ kwụsịrị ịrịa ọrịa ma nwụọ, ebe ọ bụ na ha anaghịzi eji ha egwu, ha ka na-atụ egwu n'ụlọ, gịnị mere ha ga-eji chịkwaa, ma ọ zọpụtara m n'ezie. Ma ọ dịghị mkpa maka ogologo oge, naanị m na-efesa nsị nke ụlọ m maka mgbochi, mgbe ụfọdụ, na enweghi oke ngwọta Maxim. N'ihi na lilies, ntọala nke ntọala bụ, dịka ọ bụrụ na ọ bụrụ na mmiri mmiri, fesa ya, ma ọ bụrụ nke ahụ, ma ọ bụghị, ma ọ bụ, ma e wezụga ya, nkwadebe siri ike, mgbe ọ na-agaghị ekwe omume. O yiri ka ha malitere ịmaliteghachi ya na Russia, ma ọ bụ na-ere ya, ọ bụghị mmasị karịsịa ugbu a, ma mgbe m zụtara ya, echeghị m na ọ bụ, enweghị m nghọta zuru oke na ọ dị njọ, "nchịkọta" nile dị njọ, kwesịrị ịkpachara anya iji ya. N'ozuzu, maka okooko osisi m, Agaghị m ahapụ ihe ngwọta a, ma ọ bụrụ na ọ bụ nke ọma.
Osisi bụ osisi picky. Ọ chọrọ nlebara anya na nlekọta. Ma ọ bụrụ na ị ka na-ekpebi ịmalite ịma mma a na atụmatụ gị, ị gaghị akwa ụta maka ya, n'ihi na ọ ga-eweta gị obi ụtọ. Ma ugbu a, ị maara site n'isiokwu anyị otú e si esi akụ ma na-eto eto nke dịgasị iche iche "Niccolò Paganini". Ya mere, atụla ụjọ, ị ga - enwe ihe ịga nke ọma!
Ọ dị mkpa! Iji zere ọrịa na ọnwu na-esote, na-ewepu acidification nke ala ebe rose na-eto!